जनवरी 14, 2017 नोभेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	2 Comments कन्या, कन्यादान, बुढी औला
कन्यादानमा कन्याको दहिने हातको बुढी औला नै किन ? परमात्माको बायाँ अंशबाट उत्पन्न प्रकृतिका अंश भएकी कन्याको विवाह विधिद्वारा दायाँ अंश पुरुषसँग सम्बन्धन गराउँदा कन्याको दायाँहात दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । समान वस्तुको समानवस्तुसँग सम्बन्ध सुहाउँदो हुन्छ । दाहिने हात पतिकै हो भन्ने कुरा पार्वतीको दाहिने हात महादेवले ग्रहण गरेको कुराले पुष्टि हुन्छ ।
बूढी औंला ब्रम्हाको प्रतिक र बूढी औंलाको फेद ब्रम्हातीर्थ मानिन्छ । अतः ब्रम्हाविवाहमा ब्रम्हाको प्रतीक बूढी औंला ग्रहण गरी त्यसको फेद (ब्रम्हातीर्थ) मा जलधारा चुहाई सङ्गल्पपूर्वक कन्याको दायाँहात दायाँ अंश भएको पुरुषरूप वरलाई दिनुमा सृष्टि एवं रक्षा दुवै कुराको रहस्य छ । तसर्थ आज पनि यो कुरा थाहाभएकी महिलाले आफ्नो दायाँ हात कसैलाई छुन दिँदैनन् ।
← विवाहको विदाइमा लाजा छर्कनाको कारण के हो ?
विवाह उत्सवमा हुने क्रियाकलाप →
महाभारत युद्धमा लुकेको अंक १८ को रहस्य
जनवरी 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1
2 thoughts on “कन्यादानमा कन्याको दहिने हातको बुढी औला नै किन ?”
Pingback:अध्ययन भन्छ शरीरका यी अंगहरु हातले कदापी नछुनु
Pingback:तपाईको नेतृत्व क्षमता थाहा हुन्छ हातको औँलाबाट